Faahfaahin Kasoo Baxaysa Khasaaraha Weerarkii Xarunta Gobolka Banaadir. (Warbixin) – Shabakadda Amiirnuur
July 25, 2019 5:45 am by admin Views: 292
Yariisow ayaa tan iyo xalay maray ugu yaraan sadax qalliin oo ay ku sameeyeen dhaqaatiirta turkida ee joogta isbitalka Digfeer waxaana lagu wadaa in dalka dibaddiisa loo qaado maadaama ay dhaqaatiirtu sheegeen inaan xaaladdiisa dalka wax looga qaban karin. Yariisow ayaa ka dhaawacmay qaarka sare ee jirka siibax madaxa iyo caloosha, tan iyo markuu dhaawacmayna wuxuu ahaa qof miira daboolan ama suuxsan, sida laga soo xigtay Maxamad Tuulax oo ah gudoomiye ku xigeenak gobolka Banaadir.
Agaasimigii hore ee Nabad Sugidda C/salaan ayaa sheegay in hawl galkan uu keeni karo kalsooni darro ah inaan la isku aaminin shirarka madaxda dowladda, dadka ajaanibta ahna aaney kasoo qeyb galin maadaama uu shalay si dirqi ah ku badbaaday wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay iney cambaareeneyso hawl galkan. Si lamid ah Xassan Sheekh oo ah madaxweynihii hore ee DF, ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay hawl galkan khasaaraha badan geystay wuxuuna muujiyay in DF-ku tahay mid habacsan dhanka ammaanka marka la eego isagoo ugu baaqay iney sidan wax ka badasho, inkastoo markii uu isagu madaxweynaha ahaa loogu gali jiray madaxtooyada.
Waxa kaloo aanan maanta shaqeeneyn xarumaha degmooyinka Shangaani, Cabdicasiis iyo Waabari, waayo gudoomiyaashii sadaxdan degmo waa ay dhinteen.